Ny sanda sy ROI avy amin'ny Konferansa | Martech Zone
Alakamisy 17, 2011 Sabotsy, Janoary 12, 2013 Douglas Karr
Ny kaonferansa voalohany nandehanako dia fampisehoana teknolojia indostrialy. Elektrisialy indostrialy tao amin'ny Gazety iray aho ary tsy handoa izany ny lehibeko. Ka dia nandoa ny volako manokana aho. Nanana rafitra mpampita entana izahay miaraka amina famaranana manara-penitra elektronika izay tsy maintsy manana sisin-tany akaiky toy izany amin'ireo fitaovana hampiasain'izy ireo mandavantaona. Nandalo an-jatony amin'izy ireo izahay ary dolara an-jatony avy. Tamin'ny fampisehoana dia nahita orinasa iray izay nanao laharam-pahamehana amin'izy ireo miaraka amin'ny endrika, habe ary ny toerana halavirana akaiky rehetra aho. Nanandrana sensor vaovao iray tsy lafo vidy kokoa izahay izay manana elanelana lehibe kokoa… ary tsy mila manolo iray intsony.
Nanavotra ny orinasanay an'arivony dolara ny kaonferansa, saingy tsy nandany ny 20 $ ny lehibeko hidirana. Lesona teo amin'ny fiainana ho ahy izany fa mendrika ny lanjan'izy ireo amin'ny volamena ny fihaonambe. Ka manaitra ahy izany fa betsaka ny orinasa tsy manana teti-bola akory hanatrehana fihaonambem-paritra, na firenena na virtoaly! NY Zoomerang Ny valim-pifidianana isan-kerinandro dia nampiseho fa mihoatra ny 25% no tsy manana teti-bola ho an'ny kaonferansa rehetra! Ny kaonferansa dia milina filamatra. Tsy vitan'ny hoe manaitaitra anao fotsiny izy ireo satria voahodidin'ny namana ianao, fa mamerina ny fizotranao ny eritreritrao ary mampisaintsaina anao ivelan'ny zavon'ilay orinasanao.
Konferansa nasionaly - raha ny marina dia tsy dia mandeha am-pivoriana mandritra ny kaonferansa nasionaly aho! Mandany ny fotoanako ao amin'ny lapan'ny mpivarotra aho ary mandehandeha mifampiresaka mifandray amin'ireo mpitarika indostria. Amin'ny alina, azonao atao ny mahita ahy isaky ny trano fandraisam-bahiny misy trano fonenan'ireo vahiny. Mahagaga ny resaka miaraka amin'ny mpitarika indostria. Raha avelanao handeha amin'ny fihaonambem-pirenena ny mpiasanao dia omeo teti-bolam-bar izy ireo hahafahan'izy ireo mividy prospect, mpivarotra, na mpitarika indostria hosotroina iray na roa. Eo no miseho ny majia!
Fihaonambem-paritra - raha te hiseho ho lehibe eo amin'ny sehatra nasionaly ianao dia tsy maintsy lehibe isam-paritra. Tiako ny mitarika fivoriana amin'ny kaonferansa rezionaly. Manome ahy fotoana hanandramana fampisehoana vaovao miaraka amin'ny mpihaino mahazatra sy hihaona amin'ny talenta eo an-toerana. Manatrika fivoriana mandritra ny kaonferansa isam-paritra aho ary matetika mandingana ny zava-pisotro aorian'izany. Indraindray somary somarikoriko na saritaka ny fotoam-pivoriana… fa matetika aho miala amin'ny vaovao azoko ampiasaina. Ireto fihaonambe ireto dia tsy dia lafo loatra, noho izany dia mora kokoa ny manao ROI.
Konferansa virtoaly - raha mpivarotra na mpandahateny ianao dia tsy misy tambiny fampiasam-bola tsara kokoa noho ny valan-dresaka virtoaly. Manatrika ireo hetsika ireo ny olona hianarana sy hividianana. Raha miahy ny hihaona amin'ny mpandahateny izy ireo dia tokony ho nandeha tamin'ny fihaonambe. Ny orinasa ivoahantsika amin'ny kaonferansa virtoaly (ho an'ireo orinasa 2 farany niarahako niasa) dia nahagaga. Raha mpanatrika ianao dia mahafinaritra izany - afaka miala ianao, miverina, mijery ny demo rehetra tianao, ary ataovy amin'ny latabatrao (na fandriana).
Tsy misy fihaonambe? Marina aho ary lazaiko aminao fa ny atidohanao (na raha ianao no sefo… ny atidohan'ny mpiasanao) dia mivadika ho holatra. Mialà amin'ny birao ary miverena maka recharged! Raha lehibenao ianao dia fanamby ny mpiasanao hiverina amin'ny paikady 3 lehibe handresena ny fandaniana sy ny vidin'ny tapakila. Raha mpiasa ianao dia mampanantena amin'ny lehibenao fa hiverina amin'ny paikady telo mahomby handoavana ny fandaniana ianao!
Mitady fihaonambe dia tiako Plancast ary Lanyrd. Konferansa lehibe 3 tiako indrindra BlogWorld Expo, Webtrends Engage, ary Fifandraisana ExactTarget. Eto an-toerana eto Indiana, BlogIndiana dia ankafizina. Ary fihaonambe virtoaly - tiako daholo ireo Mpandinika ara-media sosialy hetsika sy taonina hafa!
Azafady mba omeo hevitra ireo kaonferansa tianao indrindra na nasionaly, isam-paritra na virtoaly!
Tags: fihaonambe momba ny marketing amin'ny mailakafihaonambe fivarotanafihaonamben'ny media sosialy
17 Nov 2011 tamin'ny 2:26 PM
Lahatsoratra tsara, Douglas. Ny fihaonambe dia fomba miavaka hifandraisana amin'ireo olona mitovy hevitra aminao. Miverina avy any amin'izy ireo foana aho mahatsiaro ho mavitrika sy faly amin'ny famonoana fifandraisana vaovao nataoko. Miverina ihany koa aho matetika miaraka amina hevitra iray farafaharatsiny izay misy fiatraikany lehibe amin'ny orinasako. Manentana ny orinasa rehetra aho mba hanao antoka fa manatrika ireo kaonferansa manan-danja amin'ny akany izy ireo.
17 Nov 2011 tamin'ny 7:23 PM
Ankoatry ny fahafahan'ny tambajotra, izay mendrika ny vidin'ny fidirana amin'ny ankamaroan'ny fihaonambe, ny ezaka mifantoka amin'ny tsena marindrano manokana dia mety hamokatra ihany koa. CES dia tsara amin'ny filentehany amin'ny teknolojia farany sy lehibe indrindra ho an'ny mpanjifa, fa ny fanaovana fifandraisana amin'ny fihaonambem-paritry ny fitsaboana, ohatra, dia afaka manome anao làlana anatiny amin'ny marketing teknolojia fahasalamana, izay mipoitra haingana dieny izao.
17 Nov 2011 tamin'ny 7:43 PM
Heveriko fa ny PR PR ao amin'ny DittoePR dia nanana vokatra tsara tamin'ny CES ihany koa, Zoyd. Tolo-kevitra tsara!